My second child (or) Lost of Johnnydeer in Mandalaygazette… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » My second child (or) Lost of Johnnydeer in Mandalaygazette…
My second child (or) Lost of Johnnydeer in Mandalaygazette…
Posted by johnnydeer on Sep 19, 2013 in Copy/Paste | 12 comments
ဒါကတော့ ကျွန်တော့် ဒုတိယ သားလေးပါ…ဒီသားလေး မွေးပြီးကတည်းက မန်းလေးဂေဇက်မပြောနဲ့ အင်တာနက်ရှေ့တောင် မရောက်ဖြစ်တာမို့လို့ Johnnydeer ဘယ်ပျောက်နေတာလဲ တွေးနေသူများအတွက် သားလေးပုံတင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း… (((သားနဲ့သမီး…သံယောဇဉ်ဒီနှစ်မီးကြား… Johnnydeer တစ်ယောက်…. ဗျာများပြီး သကာလ… မအားတဲ့ကြား…ဂေဇက် မိတ်ဆွေများကို… ခွင့်အမှာ ပါးလိုက်ရပါကြောင်း….)))
အော်..ဒုတိယကလေးမွေးလို့ ရွာထဲက ပျောက်နေတာပေါ့လေ…
သားသားလည်း ချစ်သုဝေ နဲ့ နီးစပ်ဖို့ ကြိုးစားဦးမှ
သားတစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက်ဆိုတော့လည်း ………
အပျော်တွေဖုံးနေလို့ ဂေဇက်ကို မမြင်နိုင်တော့ဘူးပေ့ါလေ။
ပိုစတာထဲက ကလေးကြီး အတိုင်းပဲ။
အပြင်မှာ အဲလိုကြီးထားရင် အအေးမိဦးမယ်။
ဟယ် … ဒီအရွယ်ထဲက ဒဂျီးရွာကို အမြှောက်နဲ့ချိန်ထားဒယ်တော့….
မွေးတုန်းက မထွားဖူးဗျ… ၇ ပေါင် လျော့လျော့ သေးသေးလေး…ခဏလေးနဲ့ ဒီပုံ ဖြစ်သွားတာပါပဲ…မိခင်နို့ တစ်မျိုးထဲ တိုက်တာပါ…ကလေးဆရာဝန်ကတောင် မယုံလို့ ဒိပြင် ဘာတွေ ကျွေးသေးလဲ ဆိုပြီး တရားခံစစ် လာစစ်နေသေး…မေမြို့ ရာသီဥတုနဲ့ ဒီလူဝလေးနဲ့ တန်းတွေ့တော့တာပဲ…၀တဲ့ကလေးဆိုတော့ ရင်တွေကျပ်ပြီး အသက် ရှုရ တအားခက်နေတာနဲ့ ဒီကြားထဲ ဆေးရုံက ၃ ရက်လောက် ပြေးတက်လိုက်ရသေး…နှစ်ယောက်ဖြစ်သွားတော့ သမီးကြီးက အဖေ့ခေါင်းပေါ် Auto ရောက်လာတော့တာပဲ…မူကြို ပို့ ပြန်ကြို …ထမင်းချိုင့်ပို့ အ၀တ်အစားလဲ ရေချိုးပေး…ထမင်းကျွေး…အိပ်အောင်သိပ်…ဒီကြားထဲ….ဆော့ကူရသေး…..ဟူး…လွယ်ပါဘူးဗျာ…လူဖြစ်အောင် မွေးရတာကလဲ…လူပျိုတုန်းက ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကရိကထ ကို ထဲထဲ ၀င်ဝင် မသိဘူး…တစ်ယောက်မွေးတော့ နှစ်ယောက်မွေးတဲ့သူတွေရဲ့ ကရိကထ ကို သေသေချာချာ မသိပြန်ဘူး…တစ်ယောက်ထဲ တုန်းက အမေနဲ့ ပစ်ပြီး ဒိုးလို့ရသေးတယ်…ခုများတော့…တနေကုန် ဘာတွေ ရှုပ်လို့ ရှုပ်နေမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး…ညဆိုလဲ တစ်ယောက်တစ်မျိုး…လေနာ…ချွဲကျပ်…ချောင်းဆိုး…ဒီတသက်တော့ ဘယ်တော့များမှ အိပ်ရေး၀၀ အိပ်ရပါ့…လို့တောင်တွေးမိပါတော့တယ်..
ခလေးပြုစုရတဲ့ ဒွတ်ခတေ သိပ်မညဉ်းပါနဲ့ အူးလေးရယ်….သများတို့ရွာထဲက အပျိုရီးတေ ကျွတ်တန်းဝင်ကုန်ပါ့မယ်..အာဟိ :hee:
ကလေးလေးကချစ်စရာလေး.. အဲလိုပုံလေးတွေအများကြီးရိုက်ထား.. သူအရွယ်ရောက်လာရင်ပြန်ပြလို့ရအောင်..